Intuthuzelo yanamhlanje kunye nomtsalane weklasikhi: Isitudiyo sikaBradshaw
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguBrendan
Wamkelekile kwiBradshaw Living... ibhalansi egqibeleleyo yembali yerustic kunye nentuthuzelo yanamhlanje. I-suite ilungele abahlobo okanye oogxa abahamba kunye. Iibhedi zikaKumkanikazi kunye noSuku zithatha ngokukhululekileyo abantu aba-3.
Ixhotyiswe ngokupheleleyo ngezinto eziluncedo zasekhitshini, ibhedi ye-Queen etofotofo, nempahla yokuhlamba ye-ensuite, indawo ephezulu kuhambo olufutshane ukuya kwiindawo zokutyela edolophini, iivenkile zekofu, kunye nabarhwebi abazimeleyo. Thatha amanyathelo ambalwa ngokubhekele phaya kwaye uzifumane kumda wendlela yepaki yaseStratford entle yeLake Victoria.
Wamkelekile kwi-The Bradshaw:
Phumla entliziyweni yeyona nto ibalaseleyo kaStratford kunye nowona msebenzi ubalaseleyo wokubuyisela. Iifacade zezitena zivuleleka phambi kwakho, ziqiniswe yi-200 yeminyaka ubudala yokwenziwa kwe-timbre yemizi-mveliso kwaye igxininiswe ngobumnandi, ukugqitywa kwale mihla kunye nezinto zokuhombisa zembali.
Ophumelele iMbasa kaJames Anderson ka-2019 yokuGcinwa kweLifa leMveli & eboniswe kwi-National Geographic, isakhiwo saseBradshaw kudala saba yenye yezona ndawo zithandwayo zezakhiwo zeStratford. Ngeengcambu zembali ezilinywe ngumoya wenkqubela phambili, ipropathi ithatha indawo yayo efanelekileyo kwindawo ephambili kwiprimiyamu yexabiso leholide yokurentisa iholide.
Yakhelwe okokuqala ngo-1903 kwisitayile sase-Edwardian Classical, esizaliswe ngezitena ezinemijelo kunye nee-vousisoirs ezikhazimlayo ezakheke iifestile ezigudileyo kunye neendawo zokungena, iMooney Biscuit kunye neCandy Factory yachaza umoya woshishino welo xesha.
Kwakulo moya apho amashishini alandelelanayo azakhela awawo amafa kwa-245 Downie Street afana neBradshaw Lofts namesake, J.L. Bradshaw, omnye wabathengisi bakudala baseCanada.
Isingathwe ngobuchwephesha yingcaphephe yokwamkela iindwendwe, i-sommelier, kunye nenzalelwane yaseStratford, uBrendan McKenna (KressleyGroup.com), zonke iisuti zixhotyiswe ngokupheleleyo ngofakelo lwekhitshi lwangoku, indawo yokuhlambela ephangaleleyo, indawo yokupaka indawo yokupaka, kunye nempahla yokuhlamba impahla ukuze kube lula kuwe.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Stratford